Ndezvipi nzira dzekutsvakurudza uye kutarisa mazwi ako ezvinyorwa kuAmazon?
Zvishandiso zvekushandisa zvinogona kuitwa pasina ruzivo rwekutsvakurudza kwemashoko makuru. Mumwe nomumwe anobudirira muAmerica mutengesi wekutengesa anowedzera nguva yakawanda uye kushanda mukutsvakurudza kwemashoko makuru. Kunyatsosarudzwa kutsvaga mazwi kunogona kuwedzera bhizimisi rako rose rezvemari uye kuvandudza nzvimbo yako yepamusoro pa Amazon tsvaga tsvaga peji.
Zvichida wakamboona mazita akareba-tailed muzvinyorwa uye tsanangudzo dzeAmazon products - best tube mod e-cig. Vazhinji vevatengesi havangosanganisi chete mazwi avo anokosha mumusoro, asiwo ukuru, ruvara, mutengo, nezvimwe zvinhu zvinokosha zvinogona kuita kuti kutsvaga kutenga chinhu ichi. Uye kunyange kana iwe uchifunga kuti vashandisi havakwanisi zvakadaro, mazita makuru akafukidzirwa mazita, Amazon anofunga zvakasiyana, achipa yakakwirira yepamusoro maAmerica mapeji akanaka.
Ndicho chikonzero nei pachikamu chekutanga chekushanda kwako kwekugadzirisa iwe unofanirwa kuitisa kutsvakurudza kwemashoko ekutsvaga kutsvaga mazwi chaiwo iwe vanoda kutora uye kuisa maitiro akasiyana-siyana mumusoro wechigadzirwa, tsanangudzo, zvinyorwa, zvinyorwa, zvinowanzobvunzwa mibvunzo, URL, uye kunyange mifananidzo.
Unogona kutsvaga mashoko aya kushandisa maawa mazuva uye kunyange mwedzi pairi. Zvisinei, kana iwe uchida kuponesa nguva yako uye kuwana zvakanyatsonaka data, zvingava zvakanyanyisa kutarisa ku Amazon mazita ezvitsvakurudzo zvekushandisa Keywordtool.io kana Jungle Scout. Muchikamu chino, tichave tichinyatsotarisa zvidzidzo zvekugadzirisa uye kurukura kuti vanogona sei kubatsira ma Amazon mazita enyu ekutsvaga tsvakurudzo.
Nzira dzekuwana mazwi makuru pamusoro peAmazon
is Keywordtool.io. Ichi chikwata chinozivikanwa pakati pevatengesi veAmerica pamusana pekupa mhinduro nokukurumidza uye yakarurama. Icho chikwata chinoshandiswa nevashandisi paunogona kuwana runyorwa rwemashoko iwe unoda kungoisa zvido zvako zvinotsvaga. Pano unogona kuwana tsvakiridzo yekutsvaga Amazon chaiyo uye yeAng, YouTube, eBay, uye mamwe evanhu uye e-commerce platforms.
Keywordtool.io inoshandisa Amazon's AutoComplete kuti iwane chero yakabatana yakatsvaga mazwi ekutsvaga aunofanira kuongorora mubhuku rako.
Zvinonzwisisika kukopa aya mazwi ekutsvaga kuvhara kuGoogle Keyword Planner kuti uone kuti ndeipi iyo yakakodzera iwe. Iwe unogona kutarisa kutsvakurudza ivhu kune imwe neimwe yemashoko ekutsvaga anotsvaga. Iyi dheta ichakubatsira iwe kuti uite migwagwa yakakosheswa pane yako kuverenga.
Keywordtool.io inobatsira keyword search tool pamwe neGoogle Keyword Planner nemamwe mashizha emhizha. Zvisinei, izvi zvose zvinotsvakurudza hazvikupei ruzivo rwekutsvakurudzwa kwemashoko makuru kunotengesa kutengesa.
Jungle Scout inogona kubatsira zvikuru mubhizimusi rako munguva yaro. Ichi chishandiso chinogona kukupa nekukurumidza kupenya kwemareji yekutengeswa uye mutengo wega wega mazwi ezvasarudzwa. Iwe unogona kutarisa kushambadzira kwekutengesa panguva dzakasiyana-siyana, gore, mwedzi, vhiki, nezvimwe. Nezvose izvi zvakagadzirirwa iwe unogona kuburikidza nemashoko ako ekutsvaga kuti uzvienzanise kubva pane zvavanokwanisa kuwana. Uyezve, ichakubatsira kuti uone rudzi rwemhando yako yezvigadzirwa zvinogona kuva nepamusoro.